ဂျဲနီရေတွင်း | | ဆင်ယင်မွမ်းမံခြင်း, လက်မှုပညာ, အိမ်တွင်းလက်မှုပညာ
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့လက်မှုပညာမှာငါတို့ဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင် ဖော့ဆို့နှင့်အတူဤလှပသောဖယောင်းတိုင်ကိုင်ဆောင်သူပါစေ။ ၎င်းသည်လုပ်ရန်အလွန်မြန်ပြီးအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့စားသုံးသောဝိုင်ပုလင်းများဖော့ဆို့များကိုပြန်လည်အသုံးပြုရန်လည်းကူညီလိမ့်မည်။ အကယ်၍ စင်တာနှစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပါကအခြားသူများထက် ပို၍ ကြီးမားသည်ဆိုပါကစားပွဲကိုအလှဆင်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဖယောင်းတိုင်သို့မဟုတ် ဦး ဆောင်ပန်းကုံး
ငါတို့ဖြတ်ခဲ့တယ် ကတ်ထူပြားစက်ဝိုင်း။ ဤစက်ဝိုင်းသည်ဖန်ခွက်၏အချင်းထက်ပိုကြီးရမည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့ကဖော့ဆို့များတွင်ကပ်နိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုရေပွက်ပွက်ဆူနေသော၌စိမ်ခြင်းနှင့်ယာဉ်မတိုင်မီသူတို့ကိုခန်းခြောက်ဖို့စောင့်ဆိုင်းခြင်းအားဖြင့်ဖော့ဆို့ကိုဆေးကြောနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့မူကား, သူတို့မှအဖြစ်သူတို့ကိုချန်ထားနိုင်ပါတယ်, သငျသညျအထိဖြစ်လိမ့်မည်, ယာဉ်မှစပျစ်ရည်ကိုအရောင်တစ်ခုထိထည့်သွင်းရန်။
ငါတို့ထား၏ အလယ်၌ကြည်လင်ဖန်။ သင်လိုချင်လျှင်ဖန်ခွက်ကိုကတ်ထူပြားပေါ်ကပ်ကပ်နိုင်သည်။ အတွင်းမှကျသောဖယောင်းများကိုသန့်ရှင်းစေရန်ပြုလုပ်ရန်မှာမသင့်တော်။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျနော်တို့ဖန်ခွက်ပတ်လည်ဖော့ဆို့ကိုတင်နှင့်ကတ်ထူပြားပေါ်မှာကပ်သွားနေကြသည်။ အကယ်၍ ဖန်ခွက်ကပ်ထားခြင်းမရှိပါကဖန်ခွက်များသို့ဖော့စများကိုကော်မကပ်ရန်သတိထားရမည်။ သို့မဟုတ်ပါက၎င်းကိုနောက်ပိုင်းတွင်ဖယ်ရှားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ဖော့ဆို့လျှက်ပြီးတာနဲ့ ကျနော်တို့ကထောက်ခံမှုနှင့်အလှဆင်အဖြစ်ဖဲကြိုးထားမည်။ လေး၊
ထိုအဆင်သင့်! ဖယောင်းတိုင်နှင့်ဖယောင်းတိုင်ကိုင်ထားပြီးအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ဖဲကြိုးအပိုအလှဆင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်, ဥပမာသေးငယ်တဲ့ဆွဲပြားသို့မဟုတ်အကိုင်းအခက်သို့မဟုတ်ပန်းခြောက်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်မှုပညာ » လက်မှုပညာ » ဆင်ယင်မွမ်းမံခြင်း » ဖော့ဆို့နှင့်လျင်မြန်လွယ်ကူသောဖယောင်းတိုင်ကိုင်ဆောင်သူ